Nike + Run Club ho an'ny Apple Watch dia nahazo ny fahaleovantenan'ny iPhone | Vaovao IPhone
Nike + Run Club ho an'ny Apple Watch dia nahazo ny fahaleovan-tenan'ny iPhone
Pablo Aparicio | | Fampiharana iPhone, Apple Watch
Raha mpampiasa ny fampiharana ianao Nike + Run Club Faly ianao mahafantatra izany mandritra ny ora vitsivitsy a vaovao farany miaraka amin'ny fanovana lehibe maro izany. Ny kinova vaovao dia v5.3.0 ary tonga amin'ny fotoana mety raha toa ka mihevitra isika fa ny Apple Watch Nike + dia tsy ela akory dia nahatratra ny tanan'ny mpampiasa izay nanana faharetana ary nividy ny maodely fanatanjahantena indrindra an'ny marika fanatanjahantena malaza.
Ny tsy isalasalana fa ny zava-dehibe indrindra amin'ity fanavaozana ity dia ny sasany Fanatsarana ny app ho an'ny Apple Watch Manatsara ny fahombiazan'ny famantaranandro izy ireo raha tsy ampiarahina amin'ny iPhone ilay fitaovana. Raha ny filazan'i Nike dia nohatsarain'izy ireo ny GPS sy ny fampifanarahana ny làlana rehefa manomboka ny fiofanana avy amin'ny Apple Watch (izay ianaran'i Runtastic, farafaharatsiny rehefa manomboka amin'ny iPhone…). Etsy ankilany, rehefa manomboka fiofanana amin'ny famantaranandro isika dia tsy hanomboka ny fampiharana iPhone.
Inona no vaovao ao amin'ny Nike + Run Club 5.3.0
Fanamboarana bug ankapobeny amin'ny fanatsarana ny App sy ny fampisehoana.
Fanamboarana bibikely sy fanatsarana ho an'ny mpampiasa Apple Watch:
Fampahalalana farany azo alaina ao amin'ny famintinana ny hazakazaka Apple Watch.
Ny fanatsarana ny fandrindrana GPS / zotra amin'ny hazakazaka dia natomboka tamin'ny Apple Watch.
Mba hanolorana fiasa mahaleo tena tanteraka sy hitsimbinana ny androm-piainany, ny hazakazaka natomboka tamin'ny Apple Watch dia tsy hatomboka amin'ny Nike + Run Club amin'ny iPhone intsony.
Vaovao fotsiny HANAOVANA azy io. ALAHADY!:
Midira hazakazaka 5km eo amin'ny fiarahamonina manerantany isaky ny alahady.
Mahazoa hafatra fampaherezana avy amin'i Kevin Hart mandritra ny hazakazaka [anglisy ihany].
Mihazakazaha hazakazaka 3 km mifanesy amin'ny alahady mba hanombohana tsipika.
Makà sticker mipetaka hizara azy ireo amin'ny sarinao.
Satria ny fanatanjahan-tena tiako indrindra dia tsy ny jogging, Nike + Run Club dia tsy fampiharana izay apetrako amin'ny iPhone na Apple Watch. Tiako kokoa Strava, fampiharana ara-panatanjahantena misy ampahany ara-tsosialy betsaka sy dingana manokana, na Runtastic hatrizay, raha ampidiriko ny safidin'ny fampiharana roa dia afaka milaza aho fa saika manana izay tiako rehetra aho. Saingy, hoy ny fitenenana, "Ny fahalalam-pomba tsy manaisotra herim-po" ary mila miaiky aho fa misy ny fiasan'ny fampiharana Nike izay tiako ho hitako izay ampiasako matetika, toy ny hoe ny fiofanana dia natomboka tamin'ny fiambenana tsy manomboka koa amin'ny Iphone.
Ahoana ny fanavaozana ny Nike + Run Club farany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Nike + Run Club ho an'ny Apple Watch dia nahazo ny fahaleovan-tenan'ny iPhone
Apple dia mety mivarotra ny iPhone 7 any Indonezia taorian'ny fampanantenan-tena $ 44M R&D Investment